အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဝက်ချို အစိမ်းကြော် မှိုကန်စွန်း
ဒီပိုစ့် မှာ အရေးကြီးတဲ့ ပဲငံပြာရည် ကိုအရင် ကြော်ငြာပါရစေ။ ယုိုးဒယား စရောက်ကတည်း က ဝယ်လိုက်တဲ့ ပဲငံပြာရည် တွေအကြည်ကော အနောက်ကော ဝယ်လိုက် ပစ်လိုက် ဝယ်လိုက် ပစ် လိုက် အခု ပုံမှာ ပြထားတဲ့ တံဆိပ် ရမှာပဲ အဆင်ပြေတော့တယ် လီကျင်ကျီ့ လို့ အသ့ထွက်မယ် ထင်ပါတယ် ရှာဝယ်လိုက်ပါ ဘန်ကောက်မှာတော့ ပါရာဂွမ် က ဂေါမန့် မှာ ရပါတယ်။ ကဲ ဟင်းဆက်ချက်မယ် ဝက်သားထဲထည့်ဖို့ ကြက်သွန်ဥ တွေကိုခွာ ထားပါနော် ဥလိုက်ထည့်မှာ မို့လို့ စိပ်မနေပါနဲ့တော့....ပြီးရင် ဝက်သား ကို ပဲငံပြာရည် အချို၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဓါးပြား နည်းနည်း ဂျင်း စင်းငယ်ခန့် တို့ နဲ့ ဆား အချိုမှုန့် နယ်ထားပါ ခဏ နှပ်ထားပါ
မှို က ဘူးမှို ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျက်ပြီး သားဆိုတော့ ကန်စွန်း ကို အရင် ကြော်ပါတယ် တီက ဒီမှာ တော့ ကြက်သွန်ဖြူ မထည့်ပါဘူး ကြက်သွန်နီ ဆို ပိုမုန်းတယ် ကန်စွန်းရွက်ကြော်မှာ ထည့်ရင်ပြောတာပါ အဲ့တာ ကြောင့် မှို နဲ့ ကန်စွန်း ပဲ ပလိမ်း ကြော်လိုက်ပါတယ် ကန်စွန်းတွေ နည်းနည်း အရောင်ပြောင်းပြီဆိုတာ နဲ့ မှိုတွေပစ်ထည့် ခဏ မွှေ ခရုဆီ ထည့်လိုက် ရတာပါပဲ ဆားအချိူမှုန့် ထည့်ဖို့ တော့ မေ့နဲ့နော်....
ကဲ အားပေးလိုက်ကြပါအုံး နောက် နှစ်ရက် ဆက်ပြီး ဒီပုံနဲ့ ကန်စွန်းမှို ချည်းပဲ ကြော်ကြော်ပြီး ထိုင်ထုိုင်စားပါသေးတယ် ထမင်းတောင် မပါဘူး ကြိုက်လို့.........
Posted by တီချမ်း at 3:42 PM
Labels: ဆီပျံ, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အတို့အမြုပ်, အရွက်ကြော်, အပေါင်း
Rita May 10, 2011 at 3:57 PM
ဗူးမှိုတောင် ဝယ်ထားသေးတယ် ဟိုနေ့ကပဲ။ ကညွတ်နဲ့ ကြော်တာ ကြည့်ပြီး။ ဒါပေမဲ့ ကညွတ်တွေချည်း အရင် ကြော်စားလိုက်တယ်။ ဗူးကို ဖောက်နေရဦးမှာမို့လို့။
EEK May 10, 2011 at 4:07 PM
ကိုယ်လဲ ပဲငံပြာရည် ကောင်းကောင်း မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ခရုဆီလဲ ကုန်နေတယ်။ ဒီတော့ကာ ဒီတခါ ဘန်ကောက်တက်ရင် ပါရာဂွန်သွားပြီး အရည်တွေ အဆီတွေ ၀ယ်ဦးမှ ...
Thanks TT chan yay. u r so clever at cooking.
ချစ်ကြည်အေး May 10, 2011 at 4:27 PM
အဲဒီတံဆိပ်သိတယ်..ခရုဆီတို့ဘာတို့လည်း ရှိတယ်လေ...ကောင်းတယ် အိမ်မှာလည်း အဲဒါပဲ သုံးတယ်...:)
Addy Chen May 10, 2011 at 4:58 PM
ဟုတ်တယ် ဒရတ ကညွှတ်နဲ့ လဲ ကြော်စားလိုက်သေးတယ် နှစ်ဗူး ထပ်သွားဝယ်လာတာ စားချင်လို့ကို
မအိ ဟုတ်တယ် ယပလက် မှာ ပဲငံပြာရည် တော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ် ရွက်လှေတံဆိပ် အရင်က သုံးတာ လုံးဝ အဆင်မပြေဘူး
no par anonymous yal i learn from my mom
ဒေါ်ချစ် ဟုတ်တယ် ခရုဆီ လဲရှိတယ် ရေလည်ကောင်းတယ် အိုအိရှိပဲ
I just fried pork kone boung.As u said"Oeishi"..:)....U really good at in cooking.I'll try ur brand for soy sauce later.I use kikkoman.
တီချမ်း May 10, 2011 at 9:29 PM
အိုအိရှိ က အီး ပိုနေတယ် ဂျီးတော်
Kyaw Hnin Se Lwin May 11, 2011 at 7:45 AM
Shinlay May 11, 2011 at 10:05 PM
ဒီနေ့ တော့ ပဲငံပြာရည်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
sweetpeony May 24, 2011 at 2:55 PM
တီကို အားကျလို့ အဲဒီပဲငံပြာရည်နဲ့ အဲဒီမှိုဘူး ၀ယ်ထားတယ်... ဟိ..း)
တီချမ်း ခရုဆီ ကရော ဘယ်တံဆိပ်ကောင်းလဲ
တီချမ်း February 20, 2012 at 3:06 AM
တီကတော့ ဟင်းကြော်နေတဲ့ တရုတ်မကြီးပုံပါတဲ့ ယိုးဒယားက ဟာကိုသုံးပါတယ်